Palestina: Ny andro nahalatsahan-drà be indrindra hatramin’ny 1967 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2008 18:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, polski, Italiano, Español, Português, bahasa Indonesia, English
Dia nanomboka toy ny andro “mahazatra” ihany ny tao Gaza. Fa tamin'ny folakandro, na izany aza, mazava be fa ny 27 Desambra dia ho tsarovana manokana ho ilay andro nahalatsahan-drà be indrindra tamin'ny fifandonan'i Palestina sy Israely hatramin'ny taona 1967. Na dia ny Hamas aza no tena lasibatra nokendren'ny tafika israeliana tamin'ny fanafihana an'habakabaka nataony, rehefa nikisaka teny ny andro dia nazava fa nisy maro mihitsy ny olon-tsotra dangy izay mitontaly 225 na mihoatra an'izany.
Marcy Newman ao amin'nybody on the line dia manome amin'ny antsipirihany ny tontolo androny tao amin'ny Faritra Andrefana, avoitrany ao ny fotoana nandrenesany ny vaovao:
Haitham Sabbah, misora-tena ho “mpitoraka blaogy palestiniana toa valala voatango,” dia namoaka sary maro nalainy androany tany Gaza. Toy izao no nanazavany azy ireny:
Ny mpitoraka blaoky Marokana Al Miraat (Ilay Fitaratra) dia niala ny toerana milamina nahazatra azy, ary manambàra fa:
KABOBfest's Mohammad, monina any Palestina, dia namintina ny zava-nitranga ny androtr'iny. Afa-niresaka tamin'ireo tapaka sy namana tao Gaza izy, ary nitatitra ny fihetseham-pon'izy ireny:
Mbola betsaka momba ny fanafihana an'i Gaza, tsidiho Global Voices Takelaka manokana momba ireo zera baomba.